नेपालबाटै माउन्टेनियरिङ पढाई सुरु हुनु गर्वको विषय – Everest Times News
नेपालबाटै माउन्टेनियरिङ पढाई सुरु हुनु गर्वको विषय
–लाक्पाफुटी शेर्पा, क्याम्पस प्रमुख, नेपाल माउन्टेन एकेडेमी
हिमालसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन नेपालमै गराउन नेपाल माउन्टेन एकेडेमीमा पहिलो कार्यकालदेखि लागी परेकी थिइन् लाक्पाफुटी शेर्पा । दोस्रो कार्यकालको अन्ततिर उनको सपना पुरा भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हिमालसम्बन्धी ब्याचलर इन माउन्टेनियरिङ स्टडिज(बिएमएस)लाई माघ २५ गते सम्बन्धन स्विकृति गरेपछि यसको पढाई हुने पक्का भएको हो ।
यसै शैक्षिक सत्रबाट सुरू हुने ४ वर्षे र ८ वटा सेमेस्टरमा साताैं र आठौं सेमेस्टरमा विद्यार्थीले ६ हजार र ७ हजारको हिमाल आरोहण गर्नुपर्नेछ । पर्यटनविद् प्राध्यापक डाक्टर रमेशराज कुँवरको प्राज्ञिक संयोजकत्वमा विभिन्न विज्ञहरूको सहभागितामा स्नातक र स्नातकोत्तर तह कोर्ससमेत तयार पारिसकेको छ । तीन किताबसमेत लेखिसकेकी उनले एकेडेमी प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । यसैबारे क्याम्पस प्रमुख लाक्पाफुटी शेर्पासँग एभरेस्ट टाइम्सले गरेको कुराकानीः
बिएमएसमा कस्ता विद्यार्थी भर्ना हुने पाउनेछन् ?
यो मेनेजमेन्ट विषय हो । कक्षा १२ पास गरेका र हिमाल सम्बन्धी पढाईमा रुचि राख्ने जोसुकैले बिएमएसमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था छ ।
यस विषय पढेपछि के कस्ता अवसर पाइएला ?
हिमालमा काम गर्नेहरु अहिलेसम्म आफ्नै बलबुताले विभिन्न एजेन्सी खोलेर बसेका छन् । उनीहरुले यसबारे धेरै अध्ययन गरेका छन् र खारिएका छन् । तर, उनीहरुले कुनै मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । यस्तो प्रमाणपत्रको अभावमा उनीहरु सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन् । हिमालमा आरोहणका क्रममा विभिन्न घटना दैनिक भइरहेका छन् । नेपालमा सेनाप्रहरी उद्दारमा खटिन्छन् । तर, हिमालका अग्ला ठाउँ र अप्ठेरो ठाउँमा उनीहरु पनि जान सकिरहेका छैनन् । पक्कै पनि यो विषय पढेपछि थुप्रै अवसर खुल्नेछ । सेनाप्रहरीमा, लोकसेवामा प्रवेश गर्न पाउनेछन् । यो विषय पढाई हुनै लाग्दा सेनाप्रहरीदेखि लोकसेवासम्मका विभिन्न पदाधिकारीले हामीलाई धन्यवाद दिएका छन् । नेपालमा मात्र होइन यस विषयको पढाईले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि पाउनेछ । रोजगारीका ढोकाहरु जताततै खुल्नेछ भन्ने मेरो आशा छ ।
यसको प्रक्टिकल हेर्दा पढाई निकै महँगो होला जस्तो देखिन्छ, के नेपालीले पढ्न सक्लान ?
हामीले तीनवटा क्याटागोरी बनाएका छौं । नेपाल, सार्क र अन्तर्राष्ट्रिय, यी तीनै क्याटागोरीका विद्यार्थीले ६ लाख रुपैयाँमा बिएमएस पुरा गर्न सक्नेछन् । यो सेन्सिटिभ विषय र चूनौतीपूर्ण पनि छ । नेपालीलाई केही सहुलियत दिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
पहिलोपटक पढाई हुदैंछ, कोर्सहरु तयार गर्न कतिको अप्ठेरो भयो ?
हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै माउन्टेन एकेडेमी थियो । जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हामीले सम्बन्धन प्राप्त गरिसक्यौं । अहिले बिएमएस र मास्टर अफ एड्भान्चर टुरिजम स्टडिज(एमएटिएस)को कोर्स तयार भइसकेको छ । बिएमएस पढाईको स्विकृति पाइसकेको छ । एमएटिएसको पनि प्रक्रियामा छ । हामीले यो कोर्स पर्यटन् विद् डा रमेशराज कुवँरको संयोजकत्वमा तयार पारेका हौं । यो तयार पार्न ३ वर्ष लाग्यो । कोर्स तयार भएपछि विश्वका चर्चित विभिन्न ८ विश्वविद्यालयमा क्रसचेक गर्न पठाइयो । त्यहाँबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर पुनः कोर्स बुक बनाईयो । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मेनेजमेन्ट विषयका डिन पुस्कर बज्राचार्यसँग उक्त कोर्स बुक पठाइयो । उहाँको सुझावपछि बल्ल कोर्स बुक तयार भयो । निकै गाह्रो भएपनि निकै राम्रो बनेको छ कोर्स बुक ।
के कस्ता विषयहरु कोर्समा छन् ?
हिजोसम्म हिमाल एउटा हिउँको थुप्रो थियो । हिमालमा पर्यटक आउन थालेपछि यो चढ्ने र झर्ने ठाउँमा परिणत भयो । तर, हिमाल आफैमा वृहत विषय हो । यहाँ एउटै मान्छेको विषयमा घन्टौं रटाएर पढाई हुन्छ भने हिमालको विषयमा किन पढाइ नहुने ? हो यही विषय खट्केको थियो । आज यो सपना पुरा भएको छ । विश्वका अग्ला हिमालहरु यही नेपालमा भएपनि हिमालमुनिका पहाड र तराइका नेपालीले नै हिमालबारे धेरै कुरा थाहा छैन । यसैले हिमालका संस्कृति, हिमालमा हुने विभिन्न गतिविधि, हिमालमा गर्न सकिने गतिविधि, हिमालको महत्व, संसारभरका हिमालबारे जानकारी, मेनेजमेन्ट कोर्स, पर्यटन प्रवद्र्धनका विषय कोर्समा समेटिएका छन् ।
नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो पढाईले कतिको सहयोग गर्ला ?
यस्तो पढाई विश्वमै पहिलोपटक हिमालको देशबाट सुरु हुदैछ । यो सम्पूर्ण नेपालीको लागि गर्वको कुरा पनि हो । यसबाट पक्कै पनि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ । नेपालको नेचुरल हस्पिटालिटीमा नयाँ आयाम थपिनेछ । पर्यटकलाई स्वागत गर्ने र यसको व्यवस्थापनमा पक्कै सुधार आउने छ । विश्वका मानिसहरु यही विषय पढ्न नेपाल आउनेछ । यसैले म त एकदमै ढुक्क छु, यस विषयको पढाइले पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष भूमिका खेल्नेछ ।